မွတ်ဆလင်လူရမ်းကားဝါဒဆိုတာ အရမ်းကို ယုတ်ညံ့ပါတယ်။ လူသားအကျိုးပြုလုပ်ရပ်တွေမှာ မွတ်ဆလင်တွေကို ရှာလို့မတွေ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတိုင်းမှာတော့ မွတ်ဆလင်တွေ ပါတ်သက်နေပါတယ်။ မကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေမှာ ကုလားတွေက အရမ်းလူညီပြီး တက်ကြွပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာ မွတ်ဆလင်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံထဲ ၀င်ခွင့်ရအောင် ကုလားတွေက တက်တက်ကြွကြွ ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ ဒေါသထွက်မလား? ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ အဲဒါက အကျိုးမရှိပါဘူး။ ဘာမှ မလုပ်ပဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေမှာလား? အဲလိုတော့ တာဝန်မမဲ့ပါနဲ့။ လူသားတိုင်းဟာ အများအကျိုးကို သယ်ပိုးရမယ့် တာဝန်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ ခင်ဗျားဟာ မွတ်ဆလင်လူရမ်းကားဝါဒကို ရွံရှာတယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားနဲ့ နီးစပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ၂ ယောက်လောက်ကို စည်းရုံးပြီး မွတ်ဆလင်ဆန့်ကျင်ရေး အသင်းဖွဲ့ လေးတွေဖွဲ့ပါ။ ဘလော့ထောင်ပါ။ ဆောင်းပါးရေးပါ။ ကဗျာတွေနဲ့ သယော်ပါ။ နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ ယုတ်ညံ့တဲ့ မွတ်ဆလင် ၀ါဒအကြောင်းကို လူထု သိရှိအောင် ကြံစစေချင်ပါတယ်။ အကြမ်းမဖက်တဲ့ တခြားနည်းလမ်းတွေလဲ ကြံဆောင် လုပ်ဆောင်ကြပါဗျာ။ ဘေးထိုင် ဘုပြောတဲ့ အလုပ်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့။ ဆရာကြီးတွေလိုလဲ ဟန်ကြီး တစ်ခွဲသားနဲ့ လက်ပိုက် ကြည့်မနေပါနဲ့။ တာဝန်ယူတတ်ပါစေ
ကုလားတွေ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ လိမ်ညာ အကောက်ကြံနေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်လိုက်ပါဦး ။ မြန်မာ့ခွပ်ဒေါင်းအလံနဲ့ ခေါင်းစီးကတော့ ကုလားတွေရဲ့ အသုံးချခံပစ္စည်းလေး တစ်ခုပါပဲ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 11:12 PM
လို၊ဒီဆောင်းပါးတွေသူများပို.တာ၊ဒီသတင်းတွေခင်ဗျားသူများဆီကလင်.လုပ်တာ၊ခင်ဗျားက messenger ဘဲ၊ခင်ဗျားနဲ.မဆိုင်
ဟာအဖျက်ခံခဲ.၇ပြီးဒီလူတွေ၇ဲ. IP address ဟာ ban လုပ်ခံခဲ.၇ပါတယ်။ဒီမှာဘဲ၇ခိုင်လူမျိုးများနှင်.အနေဖြင်.နောက်ကျောကို
ဒါပေမဲ.ဒီအေ၇းဟာအချိန်တိုတိုအတွင်း United Nation ကိုေ၇ာက်၇ှိသွားတော.ဒီမိုကေ၇စီခုတုံးလုပ်နေတဲ.ဒီမိုကုလားတွေကိုလျှော.
၇ခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ထပ်ဖို.ဘယ်သူမှပါမစ်ယူ၇န်မလိုအပ်ပါ။၇ခိုင်လူဦးေ၇ဧ။် ၇ာနှုန်း၁၀၀ နီးနီးတ၇ား၇ုံးသွားလက်မထပ်ပါ။၇ခိုင်ပြည်
်တော်များနေထိုင်ပါတယ်။သူတို.ဘယ်တော.မှ၇ခိုင်ခ၇စ်ယန်ဟူ၍သုံးစွဲတာမတွေ.၇ှိ၇ပါ၊)စစ်တွေမြို.ကလေယာဉ်စီးခ၇ီးသည် ၉၀ ၇ာနှုန်းဟာ
ကျနော်.ဘ၀မှာ ၃ ကြိမ်ကြုံဘူးတယ်။ဘယ်မှုဆလင်ကုလားမှသေတာမကြုံဘူး၊အဲ ၇ခိုင်တွေကတော.မသေတဲ.အကြိမ်မ၇ှိဘူး၊ခင်ဗျားတို.ကထင်
ဆွေမျိုးစုပါလို.တကြော်ကြော်အော်နေတဲ.၇ိုဟင်ဂျာပါလို.ကင်ပွန်းတပ်နေသူများ) မှာ၇ှိတဲ.၇ခိုင်တွေကတော.ခလေး၊မိန်းမ မလွှတ်ပါဘူး၊မီး၇ှိဖျက်ဆီး၊
ဒါတွေကိုေ၇း၇ခြင်းကခင်ဗျားကို၇ခိုင်သတင်းတွေ၊ဒီအကြောင်းတွေကိုဖေါ်ပြဖို.အတွက်ေ၇းတာမဟုတ်ဘူး၊ခင်ဗျားတို.အနေနဲ.မျက်မမြင်ပုဏ္လား ၆ ယောက်
ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ကိုဆေးကုယုံလေးတခုနဲ.လူတွေကလေးစားပြီးကမ္ဘာအ၇ပ်၇ပ်ကဆုပေး၊ Donate လုပ်နေတယ်လို.များခင်ဗျားတွေးနေသ
ဒီပထမလင်.ကတော.၇ခိုင်တွေ၇ဲ. another falling city ( ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို.၇ဲ.ဗုဒ္ဓတ၇ားပျောက်ကွယ်သွားတော.မဲ.မြေလို.ခံယူကြပါတယ်။)ကျောက်တော်မြို.
ဒါကတော.ခွပ်ဒေါင်းနဖူးစီးတွေနဲ.၈၈၈၈ ကျောင်းသားတွေလား၊ဒါမှမဟုတ်ခွပ်ဒေါင်းတွေ for sale ဖြစ်သွားပြီလား၊၈၈၈၈ ခုတုံးကစာေ၇းသူဟာစစ်တွေဒီဂ၇ီကော
လိပ်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ.၊အဲဒီအချိန်က မဆလ ပါတီ၇ဲ.black list ၀င်နေတဲ.ကျောင်းသားတယောက်ဆိုတာကြုံတုံးပြောပါ၇စေ၊ဒါပေမဲ.၈၈၈၈ ကျောင်းသားလို.
မိမိကိုယ်မိမိမသတ်မှတ်သလို၊ခံလည်းမခံယူထိုက်ပါဘူး၊မိမိက ၈၈၈၈ ကျောင်းသားတွေလို.သတ်မှတ်ထားသူတွေကတော.မင်းကိုနိူင်၊ကိုကိုကြီးတို.အဖွဲ.တို.ဘဲဖြစ်ပါ
တိုင်းမိမိအနေဖြင်.မသတ်မှတ်ပါ။နိုင်ငံေ၇းခုတုံးလုပ်ပြီးအမျိုးသားေ၇းသစ္စာဖေါက်သူများကို ၈၈၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟုမသတ်မှတ်နိုင်ပါ။၇ခိုင်ပြည်တွင် ၈၈၈၈
PART 1 http://www.youtube.com/watch?v=z6dIC5QfQlg&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded
PART2http://www.youtube.com/watch?v=lij1llTRzyE&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded
PART3http://www.youtube.com/watch?v=-ew_UIjp4j0&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded
PART4http://www.youtube.com/watch?v=O3G0NGbL2C0&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded
PART5http://www.youtube.com/watch?v=4C_HCTG1E-Y&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded
PART6http://www.youtube.com/watch?v=5wYEvtIUmXE&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded
PART7http://www.youtube.com/watch?v=Rdgd2uaE4fA&eurl=http%3A%2F%2Fmyanmartruthers%2Eblogspot%2Ecom%2F&feature=player_embedded
၇င် ဒေါက်တာအေးချမ်း( ဂျပန်) ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည်နိုင်ပါတယ်။